Idris Elba Sabrina ဒိုဝူရိုလက်ထပ်ထိမ်းမြား
Idris Elba လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်၎င်း၏သဘောထားကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောခဲ့သည်! ထိုသို့ဖွင့်စကားများမဟုတ်ပါဘူး။ 45 နှစ်အရွယ်မင်းသားလူသိရှင်ကြားသူ့ရည်းစား 29 နှစ်အရွယ် Sabrina ဒိုဝူရိုတစ်ဦးလက်ထပ်ထိမ်းမြားအဆိုပြုချက်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
Idris Elba Valentine Day ကိုစောင့်ဆိုင်းဖို့မဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးကိုရင်ခုန်စရာအစဉ်အလာမှာသူတဦးတည်းဒူးကျဆင်းသွားခြင်းနှင့် Sabrina ဒိုဝူရိုသည်သူ၏ဇနီးဖြစ်လာပုံစံမေးတယ်။
မင်္ဂလာသတို့သမီး Idris Elba
ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု pair တစုံရုပ်ရှင်ရုံဟောလိဝုဒ်ရီယိုမှာမိန်းမောတွေဝေလျက်ပရိသတ်များ၏ရှေ့မှောက်၌ကျင်းပခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ9ထို့နောက်မင်းသားရဲ့ဒါရိုက်တာပွဲဦးထွက်၏ Premiere - ပုံ "Yardi" ။
Idris Elba အကြံပြုချက် Sabrina ဒိုဝူရိုစေသည်
"Thor", "The Dark မျှော်စင်" နှင့်များစွာသောအခြား box Office ရဲ Blockbuster နှင့် "အလှမယ်ဗန်ကူးဗား 2014" ၏ကြယ်ပွင့်ရုပ်ရှင်အခင်းဖြစ်ပွားရာအပေါ်မရောက်မှီ။ လူတိုင်းရဲ့အံ့သြစရာများနှင့်အများဆုံး Sabrina Indris ရန်, လူစည်ကားတဲ့အခန်းများ၏ရှေ့မှောက်၌သူသူမ၏လက်စွပ်တစ်ကွင်းကိုပေး၏။ "ဟုတ်ကဲ့" ဟုအဆိုပါမှာပါတဲ့အကြားအာရုံ, အ Elbe အဖြစ်က၎င်း၏ဒုတိယတဝက်, စိတ်ခံစားမှုကိုပြန်ကိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ချစ်သူများကင်မရာတောက်နဲ့လက်ခုပ်သံအောက်မှာပွေ့ဖက်များနှင့်နမ်းတော့တာပဲ။
ဗီဒီယိုကိုထိအချိန်လေးကိုချက်ချင်း Idris နှင့် Sabrina ဂုဏ်ပြုတဟုန်တည်းပြေးတဲ့သူပရိတ်သတ်များစုံတွဲများကြားတွင်တစ်ဦးလောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားစေ network ပေါ်မှာထင်ရှား၏။
သငျသညျ @Sainou clients များ @adnanmust_ & @AkinGazi အတူ #Yardie စိစစ်စောင့်ကြည့်ဖို့ထဖွင့်နှင့်ဒါရိုက်တာ @idriselba ပြပွဲခိုးယူ ... #marriagepropsal pic.twitter.com/aLYsnMNbzA လိုက်တဲ့အခါ
- ဒါဝိဒ်သည် Marsden-Sainou (@AgentMarsden) ဖေဖော်ဝါရီလ 10, 2018
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နွေရာသီမှာတော့အဲဒီအခြိနျမှာပြီးသား Sabrina ဒိုဝူရိုနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ခဲ့သော Idris Elba, သူအိမ်ထောင်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်စိတ်ပျက်ခဲ့စိတ်ချပါ။ အဆိုပါမြောက်မြားစွာဝတ္ထုစွပ်စွဲသူသရုပ်ဆောင်, မင်းသမီး Dormove Sherman မှလက်ထပ်အဖြစ်တစ်လုပ်-up, အနုပညာရှင်ဟန္န Norgaard နဲ့ရှေ့နေ Sonya နေသည်နှင့်တူသည်နှင့်အတူရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်ခံခဲ့ရသည်။
Idris Elba ကသူ့ချစ်ရာသခင်သည်အနာဂတ်ဗြိတိန်ဧကရာဇ်ပေးအပ်
45 နှစ်အရွယ် Idris Elba အလင်း၌သူမ၏ 29 နှစ်အရွယ်ကိုနှစ်သက်ယူဆောင်
Kate Winslet သည်သူမထက်ပိုမို 12 နှစ်သင့်ရဲ့အလေးချိန်ကိုတိုင်းတာမပြုခဲ့ဟုဆိုသည်
သူ့ကိုထက်အများကြီးအသက်ငယ်သောအရာဆွဲဆောင်မှုကနေဒါမော်ဒယ်နှင့်အတူ Elbe အားဖြင့်အသစ်ဝတ္ထု, ပြီးခဲ့သည့်နှစ်သြဂုတ်လအတွင်းကမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ အများပြည်သူဆက်ဆံရေး Idris နှင့် Sabrina အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူမီ, သူတို့ခုနစ်လတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ရိုးရှင်းတွက်ချက်မှုပြီးနောက်ကြောင့်ယခုလ pair တစုံကျင်းပခဲ့သို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေး၏အစအဦး၏နှစ်ပတ်လည်နေ့ကျင်းပလိမ့်မည်ဟုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။
စက်တင်ဘာလ 2017 ခုနှစ်တွင် Idris Elba နှင့် Sabrina
စာနယ်ဇင်းအတွင်းရေးမှူးနှင့်အိမ်ဖေါ် Donald Trump: မျှော်လင့်ခြင်း Hicks ၏ဘဝအသက်တာကနေ New ကိုအသေးစိတျ
Megan Fox ကသားသုံးယောက်၏ရှားပါးသောဓာတ်ပုံများကိုပြသ
ဒါဝိဒ်သည် Duchovny ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်သူ Colin Firth
တစ်ဦးကကြည်နူးဖွယ်ဂျနီဖာလိုပက်ဇ် Guess နွေဦးကြော်ငြာကင်ပိန်း၏မျက်နှာကိုဖြစ်လာခဲ့သည်
ကမ့်ဘဲလ် Idris Elba နှင့်အတူရက်စွဲတစ်ခုသွား
ယာရက် Leto TMZ ထုတ်ဝေတရားစွဲ
Dita Von Teese ဟာကွက်လုပ်ဖို့စီစဉ်
Britney Spears virtuoso fuete ချွတ်ပြသနှင့်ပြိုကွဲအတွက်ခုန်
အားကစားရုံပလပ်စတစ်ကွန်တိန်နာအပြည့်အဝ muffins ထံမှ Beyonce ထွက်
တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်: Meryl Streep အင်္ဂတေဂုဏ်သတင်း Harvey Weinstein ၏စွပ်စွဲချက်မှတုန့်ပြန်
အဆိုပါခြေကျင်းအဆစ်ရောင်ရမ်းခြင်း - အကြောင်းရင်းများနှင့်ကုသရေး
အနာကိုခြေဘဝါး - အကြောင်းရင်း
Odzhahuri - စာရွက်
ပန်းရောင် zoster - အကြောင်းရင်းများနှင့်ရောဂါအုပ်ချုပ်မှုကို Gibert ကုသ
Shock! ဒါဟာပင်လယ်ရေတစ်စက်တူ, 25-ခြံတိုးလာ
ဒတ်ခ်ျဘုရင်က Willem-Alexander ဟာတရုတ်ရန်သူ၏သမီးကြီးတစ်ဦးပြောင်းရွှေ့၏ဆွေးနွေးချက်ကပြောပါတယ်